?Waa ceeb in hay?ada caafimaadku ay shacabka Puntland ku qiimeeyaan 900,000 oo qof, marka la qaybinayo adeegyada caafimaadka? Dr. Warsame, wasiirka caafimaadka ee Puntland. – Radio Daljir
?Waa ceeb in hay?ada caafimaadku ay shacabka Puntland ku qiimeeyaan 900,000 oo qof, marka la qaybinayo adeegyada caafimaadka? Dr. Warsame, wasiirka caafimaadka ee Puntland.
Garowe, Aug 10 – Wasiirka caafimaadka ee Puntland Dr. Cali C/llaahi Warsame oo ka hadlay adeegyada caafimaad ee hay’adaha caalamku ay u qoondeeyaan Somaliya ayaa sheegay in ay ceeb iyo cayn ku tahay shacabka Puntland in hay?adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya caafimaadku ay ku qiimeeyaan 900,0000 qof, marka gobollada Soomaliya loo qaybinayo adeegyada caafimaadka.
Wasiirku waxaa uu dhaliilay Somalida u shaqaysa hay’adaha caalamiga ah ee qaabilsan daryeelka caafimaadka, oo uu sheegay in ay bixiyaan xog galdan oo aan ka tarjumayn tirada dhabta ah ee dadka ku nool Puntland.
Waxaa uu intaas ku daray in ay ku dadaalayaan in ay saxaan galadkaas, daryeelka caafimaad ee loo qorsheeyo Puntland uu noqon doono mid ka tarjuma tirada dhabta ah ee dadka ku nool Puntland.
Dr. Warsame ayaa sidoo kale sheegey in adeegyada caafimaadku ay yihiin kuwa keliya ee dawlliga ah ee gaara gobol kasta iyo degmo kasta.
Waxaana uu hadalkiisa sii raaciyay adeegyada caafimaadka ee wasaaraddu ay gaareen meelo ka baxsan xuduudaha gobollada Puntland.
Wasiirka ayaa sheegey in wasaaradda caafimaadku diiwaan-galineyso dhammaan hay?adaha maxalliga ah ee ka shaqeeya arrimaha caafimaadka; waaxaana uu intaas raaciyay in wasaaradu ay u baahan tahay hay?ado maxalli ah oo kala shaqeeya baahida caafimaad ee ka jirta Puntland.
Dr. Warsame ayaa bulshada reer Puntland ugu baaqey meel kasta oo ay joogaan in ay fahmaan ahmiyada ka hortagu leeyahay, in ay fahmaan waalidiintu waajibaadka ka saaran caafimaadka dhallaanka, in ay fahmaan tani in ay tahay fursad aad u wanaagsan, ayna ka faa’iidaytaan.
Wasiirka ayaa ka hadlay shir muddo 2 cisho ah uga socdey magaalada Garowe saraakiisha wasaaradda caafimaadka ee Puntland, isu-duwayaasha wasaarada ee gobollada, hay?adaha wadashaqeynta la leh wasaarada caafimaadka, iyo bahda saxaafada ee wasaaradda kala shaqaysa wacyigelinta tallaalka.
Waxaa dhawaan la soo gabagabeeyey ololihii maalmaha caafimaadka dhallaanta ee barnaamijka CHD.